सामुहिक बलात्कारमा परेकी युवतिको पत्रमा कानुन मन्त्रीको जवाफ, तपाईंलाई न्याय दिलाउँछुु ‘बलात्कृत हुनु तपाईंको दोष होइन, पूजा’ – Peacepokhara.com
सामुहिक बलात्कारमा परेकी युवतिको पत्रमा कानुन मन्त्रीको जवाफ, तपाईंलाई न्याय दिलाउँछुु ‘बलात्कृत हुनु तपाईंको दोष होइन, पूजा’
काठमाडौ, पुस २
तपाईंले २०७१ पुस १ गतेको कान्तिपुरमा मलाई सम्बोधन गरेर लेख्नुभएको पत्र पढेर म स्तब्ध भएँ । तपाईंमाथि भएको चरम अमानवीय र क्रूर अपराधको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यस अपराधसँग जोडेर तपाईंले उठाउनु भएको अदालती न्यायको निष्पक्षता र स्वच्छतामाथिको प्रश्न, मुलुकको न्याय, कानुनमन्त्रीका रूपमा मेरा निम्ति थप चिन्ता र चुनौतीको विषय बनेको छ ।
बैतडी जिल्ला अदालतले बलात्कारका दोषी ठहर गरेर कैद र जरिवाना गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनरावेदन अदालतले केका आधारमा निर्दोष सावित गरेर छाडिदियो भन्ने कुराको यथार्थ छानबिन गर्न आजै (मंगलबार) मैले न्यायपरिषद्का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष औपचारिक पत्र लेखेको छु । मंगलबार दिउँसो बसेको न्यायपरिषद्को बैठकमा समेत यस विषयसँग सम्बन्धित सबै पक्षमा गम्भीर चासोका साथ छलफल भएको छ ।
आजै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पनि सम्पर्क राखेर तपाईंको मुद्दाको वर्तमान अवस्थाबारे मैले जानकारी लिएँ । मलाई जानकारी दिइएअनुसार तपाईंका तर्फबाट नेपाल सरकारले यही २०७१ मंसिर २१ मा सर्वोच्च अदालतमा सुरु अभियोगमा गरिएको माग दाबीबमोजिमै आरोपीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने बेहोरासहितको पुनरावेदन गरिसकिएको रहेछ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा यथाशीघ्र आफ्नो न्यायिक विवेक पुर्‍याउने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
तपाईंले उल्लेख गरेझैं यतिखेर हामी १ सय ६१ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन बनाउने तयारीमा पनि छौं । महिला हिंसाविरुद्धका अन्य विधेयकमाथि पनि यतिखेर संसद्मा छलफल हुँदैछन् । बलात्कार सम्बन्धमा पनि नयाँ ऐनलाई पीडित-मैत्री कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको राय समावेश गरेरै कानुन बन्दैछ । एकैजनाले भनेजस्तै सबै नहोला, तर यस मुलुकमा छोरीहरू निर्धक्क हिँड्न सक्ने कानुनी प्रबन्ध हामी गर्नेछौं ।
तर बलात्कारजस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन बनाउनुमात्रै पर्याप्त हुँदैन, कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन र पीडितहरूको सुरक्षाका लागि परिवार, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, समाजसेवी र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी र टेवा झनै आवश्यक हुन्छ । केही समयअघि आफ्नै बाबु र हजुरबुवाद्वारा निरन्तर आठ वर्षसम्म घरभित्रै बलात्कृत भएकी एउटी युवतीको प्रसंग चर्चामा थियो । मान्छेमा नैतिकताको ह्रास भएको योभन्दा ठूलो उदाहरण के हुन सक्छ रु दुर्भाग्यवश, बलात्कारीलाई कानुनमै प्रबन्ध भएको सजाय पनि त्यस घटनासँग सम्बद्ध ती छोरीका निम्ति कुनै कामको हुन सकेन । हाम्रो समाजका लागि यो भयानक लज्जाको विषय होइन र ?
तसर्थ व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ- बालबालिकाहरूलाई नैतिक र चरित्रवान बनेर हुर्कनरबढ्न सक्ने वातावरणको निर्माण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, ताकि हाम्रा छोराहरू बलात्कारी बनेर नहुर्कून् । समाज र समुदायमा नेतृत्वदायी तथा उत्प्रेरकको भूमिकामा रहनुभएका सबै मित्रहरू, खासगरी अभिभावक र विद्यालयका शिक्षकहरूलाई यही पत्रमार्फत म अनुरोध गर्छु- केटाकेटीहरूमा सदाचरणको विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउनुहोस् । बालिकाहरूलाई यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कारबारे बेलैमा सजग सूचित गराउने र त्यसबाट जोगाउने सबैभन्दा निकट र उपयुक्त स्थानमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ । हाम्रा छोरीहरूले बलात्कृत बनिसकेपछि मात्रै कानुन खोज्नु नपरोस् । बलात्कृत महिलालाई हेर्ने हाम्रो नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न पनि तपाईंहरूको सहयोग आवश्यक छ । सरकारले एक्लै केही गर्न सक्दैन, तपाईंहरूको सहयोग भयो भने धेरै कुरा गर्न सक्छ !
पूजा, तपाईंले पत्रमा मेरो अभिभावकत्वमाथि भरोसाको कुरा गर्नुभएको रहेछ । लोकतान्त्रिक सरकार भनेकै आफ्ना नागरिकप्रति अभिभावकत्व दिनुपर्ने मान्यतामा आधारित सरकार हो । न्याय, कानुनमन्त्री भएका कारणले म जान्दछु, यो क्षेत्रमा पनि समस्या छन्, त्यही भएरै पीडित नागरिकको न्यायसम्मको सहज पहुँच बढाउन तथा न्यायसेवालाई स्वच्छ र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन कसरी सकिन्छ भनेर म सुधारका लागि प्रयत्न गरिरहेको छु ।
बलात्कृत हुनु तपाईंको दोष होइन, पूजा । तपाईं यसबाट लज्जित वा विचलित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तपाईं आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्नुहोस्, तपाईंलाई न्याय प्रदान गर्न म, सरकार र आफ्नातर्फबाट समेत सबै प्रयत्न गर्नेछु । तपाईंलाई अप्ठेरोमा आश्रय दिने समाजसेवी संस्था रक्षा नेपाललाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ । यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई गम्भीरताका साथ अगाडि ल्याएकामा कान्तिपुर दैनिकलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु ।
नरहरि आचार्य, कानुन तथा न्यायमन्त्री
फैसलाले बल्झायो घाउ
उनले धेरै प्रयास गरिन् । चिकित्सकका कुरा सुनिन्, औषधिहरू खाइन् । तर अहँ त्यो विगतको कालो छायाले पिछा गर्न छाडेन । सम्झन्छु भनेको बरु कति कुरा बिर्सिइन्छ । तर बिर्सन चाहेको त्यही कुराचाहिँ उनको मुटुको कोमल तन्तुमा आइरहन्छ झम्टन ।
सामूहिक पाशविकताको सिकार भएको ३ वर्षअघिको पीडा शरीरले भुले पनि पूजा बोहराको मनले एकरत्ति भुल्न सकेको छैन । ‘म चाहन्छु त्यो दिन मेरो जीवनमै थिएन भने जसरी बिर्सन,’ पूजा भन्छिन्, ‘तर सकिरहेको छैन, मन खालि त्यही कालो दिनमा पुगेर अडिन्छ र असाध्यै अररो भएर दुख्छ ।’ पूजाले त्यो बर्बरता बिर्सन आफूलाई व्यस्त राखेकी छन् । सुरुमा पीडा कतिसम्म थियो भने उनी के(के भयो भनेर भन्न सक्ने हालतमा समेत थिइनन् । ‘मलाई त मरी भनेर नालीमा फालिदिएका थिए रे,’ पूजा भन्छिन्, ‘ब्युँझँदा अस्पतालमा थिएँ ।’
विस्तारै दिनहरू बित्दै गएपछि उनले थाहा पाइन्, आफूमाथि के गुज्रिएको थियो भनेर । उनका बा अरूको घरमा हली बसेर छोरीलाई पढ्ने कापीकलम किनिदिन्थे । अहिले पनि बैतडीस्थित उनको गाउँ कैलापालमा सडक र बिजुली पुगेको छैन । तिनताक त के पुग्थ्यो र १ गरिबी कतिसम्म भने घरमा टुकीसम्म थिएन । ‘म जूनको उज्यालोमा पढेर पनि सधैं पहिलो हुन्थें,’ पूजा भन्छिन्, ‘इन्जिनियर बनेर गाउँमा बाटो ल्याउँला भन्ने सपना बुनेकी थिएँ ।’ र सदरमुकाममा एसएलसी दिन गएका बेला बैतडी भूमेश्वरका सागर भट्ट र अमर अवस्थीले उनको सपनामा डढेलो लगाइदिए । उनलाई निर्मम लुटेनन् मात्र, पत्तीले चिरेर नालीमा फालिदिए ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले जाहेरी दिए, तर प्रहरीले लिन मानेन । पछि विद्यार्थीहरूले जुलुसै निकाले र बजारै बन्द गरे । अनि मात्रै उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो र मुद्दा चलायो । काठमाडौंमा उपचाररत पूजालाई मुद्दा चलेको पत्तो थिएन । उनलाई आश्रय दिने रक्षा नेपालकी मेनुका थापाले अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै पूजालाई मुद्दा चलेको बताइन् । २०६९ पुसमा बकपत्रका लागि पूजा जिल्ला अदालत बैतडी जानुपर्ने भयो । उनलाई त्यो ठाउँ कहिल्यै जान नपरोस् र ती व्यक्ति फेरि देख्न नपरोस् भनेर बसेकी थिइन् ।
‘काठमाडौंबाटै बयान दिन पाइने भए म जान्नथें, नपाइने रहेछ गएँ,’ पूजाले भनिन्, ुन्यायाधीश हिमालय पाठकको अघिल्तिर मैले त्यो कालो दिनको सबै सम्झनाहरू अदालतको नेपाली कागजमा लेखाएँ । मैले बयान दिएको त्यही एक पटक हो । तर पुनरावेदनका न्यायाधीशले ठाउँ-ठाउँमा कुरा फेरेको भनेर अपराधीलाई छाडिदिएछन् । मलाई सोधिएकै एक ठाउँमा मात्र हो भने कुरा मैले कहाँ-कहाँ फेरें त ?
जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरूलाई जनही १३ वर्ष कैद सुनाएपछि पूजालाई हल्का चित्त बुझाउने बाटो मिलेको थियो । ‘कम्तीमा न्याय त पाएँ नि भन्ने लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मैले जीवनलाई आँसुको पोखरीबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरें, फेरि पढ्न थालें र ७० प्रतिशत ल्याएर एसएलसी गरें ।’ पीडाको भुमरीबाट निक्लँदानिक्लँदै उनी व्यवस्थापन पढ्न ११ कक्षमा भर्ना भइन् । खेलकुदमा पनि उनको खुब लगाव थियो । तेक्वान्दोका गुरु अशोक खड्काले उनलाई निःशुल्क सिकाइदिने भए । उनले ६ महिनामै तेक्वान्दोको कठिन कौशल सिकिन् । गत असारमा कोरियामा अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुँदै रहेछ । मेनुकाले उनलाई भाग लिन त्यहाँ पठाइन् । तर जाने बेलामा उनले खबर सुनिन्, अभियुक्तलाई पुनरावेदन अदालतले निर्दोष भनेर छाडिदियो । ‘त्यो सुनेर म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ, बल्लतल्ल पलाएको थोरै आत्मविश्वासको पालुवा पनि हठात् निमोठियो,’ पूजा भन्छिन्, ‘कोरियामा प्रतियागिता भइरहँदा म डर, त्रास र पीडाको गहिरो दहमा डुबेकी थिएँ ।’
यति हुँदाहुँदै पनि पूजाले तेक्वान्दोमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन् र स्वर्णपदकै जितिन् । राजदूत कमानसिंह लामाले उनको सम्मानमा रात्रिभोज र एउटा कदर पत्र पनि दिए । अहिलेसम्म पूजाले राम्रै बुझिसकेकी छन्, जीवन एउटै घटनाले सकिँदैन । उनीमाथि तीन वर्षअघि जे भयो त्यो दुःस्वप्न मात्र थियो भनेर बिर्सन कम्तीमा राज्यले अपराधीलाई दण्ड देओस् भन्ने उनको माग छ ।
अहिले पूजा रक्षा नेपालको छात्रावासमा बस्छिन् जहाँ उनीजस्तै समस्यामा परेका ३२ किशोरी छन् । पूजा छात्रावासमा सबैभन्दा छिटो उठ्छिन् र कलेज जान्छिन् । दिउँसो कम्प्युटर सिक्छिन् भने बेलुका तेक्वान्दो । त्यसपछि बहिनीहरूलाई पढाउँछिन्, अनि बचेको समयमा आफ्नो पढाइ पूरा गरेर ओछ्यानमा पुग्दा उनी सबभन्दा ढिलो सुत्नेमा गनिन्छिन् ।काममा यसरी व्यस्त हुँदा त्यो कालो दिनको सम्झना बिर्सिएको जस्तो हुन्छ । तर लगत्तै त्यो बर्बर यादले मुटु रोपिहाल्छ । ‘अनि म एकान्तमा जान्छु, रुन्छु र रोइरहन्छु,’ पूजा भन्छिन्, ‘त्यसबाट उम्किन डायरीहरू लेख्छु । कहिले आमालाई सम्बोधन गरेर, कहिले न्यायाधीशलाई कहिले कानुन मन्त्रीलाई ।’ कलमको टुप्पाले कापीमा पोख्दा मनको विष केही हलुका जस्तो हुन्छ । अनि फेरि कि काममा कि पढाइमा उनी लाग्छिन् ।
यस्तै गर्दागर्दा खाटा बस्न थालेको उनको घाउलाई पुनरावेदनको फैसलाले फेरि बल्झाइदिएको छ । ‘त्यसको पीडाले म न जाग्न सकेको छु न निदाउन,’ पूजा भन्छिन्, ‘तर मैले हरेस खाएकी छैन, अब कानुन पढ्छु र कुनै दिन आफैं न्यायाधीश बन्छु ताकि फेरि फेरि बलात्कारीहरूले यसरी इज्जतका साथ हिँड्न नपाऊन् र मजस्ता बालिकाले आँसुमा डुबेर बस्न नपरोस् ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
पोखराका विभिन्न स्थानमा नक्कली एटीएम कार्ड बनाएर पैसा झिक्ने पक्राउ
‘भात क्रेज’ विश्वमै बढ्दैछ